Mwari Anokuchengetedza (Jobho 34:21)
“Maziso ake [Mwari] ari panzira dzomunhu, uye anoona nhanho dzake dzose.”—JOBHO 34:21.
Kana mwana achiri mudiki ndipo panonyanyodiwa kuti achengetedzwe
CHINOITA KUTI VAMWE VASAVA NECHOKWADI: Maererano nezvichangobva kubuda pakuongorora kwakaitwa, boka redu renyeredzi rine mapuraneti anopfuura mabhiriyoni 100. Vachifunga nezveuwandu hwezvinhu zvakasikwa, vakawanda vanobvunza kuti, ‘Musiki wemasimbaose angadirei kuona zvinoitwa nevanhu vakaderera vari pakapuraneti kaduku?’
ZVINODZIDZISWA NESHOKO RAMWARI: Mwari haana kungotipa Bhaibheri ndokukanganwa nezvedu. Asi, Jehovha anotivimbisa kuti: “Ndichakupa zano ziso rangu rakakutarira.”—Pisarema 32:8.
Funga nezvaHagari, mukadzi wekuIjipiti akararama makore anenge 4 000 akapfuura. Hagari akaratidza kusaremekedza Sarai, mukadzi waaishandira, saka Sarai akamutambudza, uye Hagari akatizira kurenje. Mwari akabva akanganwa nezvaHagari here nokuti akanga akanganisa? Bhaibheri rinoti: “Ngirozi yaJehovha yakamuwana.” Ngirozi yacho yakavimbisa Hagari kuti: “Jehovha anzwa kutambudzika kwako.” Hagari akabva ati kuna Jehovha: “Muri Mwari anoona.”—Genesisi 16:4-13.
‘Mwari anoonawo’ zviri kuitika kwauri. Somuenzaniso: Amai vane rudo vanochengetedza chaizvo vana vavo vadiki, nokuti kana mwana achiri mudiki ndipo panonyanyodiwa kuti achengetedzwe. Izvozvo ndizvo zvinoitwa naMwari patinenge tisina simba uye tisingakwanisi kuzvidzivirira. Jehovha anoti: “Ndinogara pakakwirira nomunzvimbo tsvene, ndinogarawo nomunhu akadzvinyirirwa neanozvininipisa, kuti ndimutsidzire mafungiro evanozvininipisa uye ndimutsidzire mwoyo yevari kudzvinyirirwa.”—Isaya 57:15.
Zvisinei, unganetseka kuti: ‘Mwari anondiona sei? Anongotarisa zvandiri nechokunze here, kana kuti anoona zvinopfuura ipapo onyatsondinzwisisa?